Gaas oo markale isku soo sharaxay doorashada Puntland - Halbeeg News
Gaas oo markale isku soo sharaxay doorashada Puntland
GAROOWE(HALBEEG)-Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta ku dhawaaqay inuu u tartami doono doorashada madaxtinnimo ee horraanta bisha Janaayo ee sannadka 2019-ka la filayo inay ka dhacdo Puntland.
Cabdiweli Gaas ayaa hadalkan kaga dhawaaqay munaasabad lagu soo bindhigayay waxqabadka dowaladdiisa muddadii uu xilka hayay taasoo ka dhacday magaalo madaxda Puntalnd ee Garoowe.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in markale uu musharrax u yahay madaxtinnimada dowlad goboleedka Puntland oo lagu wado inay dhacdo 8-da bisha Janaayo ee sannadka 2019-ka.
Doorashada madaxtinnimada maamulka Puntland oo ay naga xigto wax ka yar bil waxaa u tagaan musharixiin fara badan oo olole ka wada degaannada Puntland.
Magaalooyinka waaweyn ee Puntalnd ayaa waxaa bilihii ugu dambeeyay kusii qul qulayay musharraxiinta u hanqal taagaya madaxtinnimada Puntland kuwaasoo dadweynaha kula hadlayay fagaarayaasha waaweyn si ay bulshada uga dhaadhiciyaan qorshayaasha waxqabad ee ay damacsanyihiin.
Doorashooyinka guud ee dowlad goboleedka Puntalnd ayaa kusoo beegmaya xilli uu wali taaganyahay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah ee ay Puntalnd-na ka mid tahay
Manchester United oo shaqada ka ceyrisay tababare Jose Mourinho
Duqeyn ka dhacday gobolka Bari oo lagu dilay rag ka tirsanaa Al-shabaab